ROM-yada loogu talagalay Android, shakhsiyee oo ka faa'iideyso moobilkaaga | Androidsis (Bogga 2)
MIUI 10 waxay muujineysaa maareeyaha ereyga sirta ah ee isku dhafan qaabeynta beta-keeda
Raadi wax badan oo ku saabsan astaamaha maareeyaha ereyga cusub ee lagu arkay MIUI 10 beta cusub isla markaana u imanaya lakabka dhawaan.
Sida loo soo degsado firmware rasmi ah Samsung terminals
Fiidiyow sharraxaad leh oo lagu ogaanayo sida loo adeegsado naqshadda cusub ee bogga sammobile.com iyo soo degso rasmi rasmi ah Samsung terminals
Soo dejiso oo rakib caado ROM Qiyaame Remix 7 oo ku saleysan Android Pie: waxaa hadda loo heli karaa dhowr nooc
Dib u soo celinta Remix 7 oo ku saleysan Android Pie ayaa hadda loo heli karaa soo dejinta iyo rakibidda moodooyinka taleefannada kala duwan.
Nooc cusub oo ka mid ah Huawei Nova 3i oo wata 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ROM ah ayaa la bilaabay
Nooc cusub oo ah 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ah kaydinta gudaha ee Huawei Nova 3i ayaa la sii daayay. Sidoo kale xulasho midab cusub.
Waa maxay Odin iyo maxaa loogu talagalay
Waa maxay Odin iyo maxaan u isticmaali karnaa. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijkan Samsung oo na siinaya hawlo badan oo dheeri ah oo taleefanka ah.
Isticmaalayaasha Huawei ee leh ROM-yada caadada ah ayaa lagu qasbay inay dib ugu noqdaan ROM-ga rasmiga ah
Huawei waxay ku qasbeysaa isticmaaleyaasha leh ROM-yada caadiga ah inay dib ugu noqdaan asalka. Raadi wax badan oo ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalaha ee leh magaca Shiinaha.
Google wuxuu bilaabaa inuu xannibo hawlgalka barnaamijyadeeda aaladaha aan shahaadada haysan
Google waxay bilowday inay joojiso ciyaarida carrab la'aanta mana ogola in adeegsiga barnaamijyadeeda iyo adeegyadeeda boosteejooyin aysan shirkaddu ka warqabin.
Ka hel 4GB RAM Vernee X oo leh 64GB ROM kaliya $ 199.99 oo ku saabsan Aliexpress
Vernee X 4GB + 64GB waxaa lagu qiimeeyaa $ 199.99 aan caadi aheyn oo ku saabsan Aliexpress. Terminalkan wuxuu leeyahay astaamo caadi ah oo heer dhexaad ah, in kastoo leh astaamo aad u wanaagsan oo hubaal aad jeclaan doonto.
MIUI 9 aad buu u dhow yahay, majeceshahay inaad hadda tijaabiso?
Nooca cusub ee MIUI 9 ayaa hadda loo heli karaa in lagu soo dejiyo noocyadiisa Alpha iyo Beta ee tijaabiyayaasha, haddii aad leedahay Mi 6 ama Redmi Note 4x horeyba waad u tijaabin kartaa
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo fiidiyow ah oo aan ku tusayo sida loo cusbooneysiiyo Rom iyada oo aan lumin xogta ama codsiyada lagu rakibay Android-keena.
Sida loo cusbooneysiiyo LG G3 ilaa Android 7.1.2 (tusaalaha caalamiga ah D855)
Casharrada fiidiyowga ah ee wax ku oolka ah ee Android oo aan ku barayo sida loo cusbooneysiiyo LG G3 ilaa Android 7.1.2 hab aan rasmi ahayn oo leh dareen nadiif ah oo ah Rom Rom.
Waxaan dib ugu noqonayaa Pixel Rom V4 !!. Miyaad imaanaysaa
Markii aan arkay in aanan isticmaalin inta badan barnaamijyada Samsung, waxaan u jeestay Pixel Rom V4 maxaa yeelay waa mida ugu wanaagsan ee maamusha batteriga Samsung Galaxy S6 Edge +
Rom ugu fiican ee xilligan loogu talagalay Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Halkan waxaad ku haysataa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku raaxaysato waxa ugu fiican Rom ee xilligan loogu talagalay Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Waxaan tijaabinay MIUI 8.2, Xiaomi waxay keeneysaa war aad u yar
Toddobaad kadib adoo adeegsanaya nooca cusub ee MIUI waxaan dhihi karnaa ma jiraan warar dhab ah, laga yaabee xoogaa khilaafaad ah.
Pixel Rom oo loogu talagalay Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Rom oo ah kan ugu fiican ee galaya Hurdo Dheer
Rom-ka ugu wanaagsan ee galaya Hurdo-Dheer ee Samsung Galaxy S6 Edge Plus, oo ah rasmi ah Android Nougat Rom oo aan lahayn wax ka badan barnaamijyada Samsung.
LineageOS wuxuu dhaafey XNUMX milyan rakibo oo firfircoon
Markuu dhaafey 500.000 rakibad firfircoon bil ka hor, LineageOS waxaa horey loogu rakibay in ka badan 1 milyan oo qalab, iyadoo OnePlus One uu hogaaminayo wadada.
Root LinageOS dhammaan moodooyinka Android
Casharkaan fiidiyowga ah waxaan ku sharraxayaa sida loo helo Root-ka LinageOS Android 7.1.1 nooc kasta oo sumadda Android iyo moodel ah oo LinageOS lagu rakibay
Dareenkayga ku saabsan Android Nougat ee Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Kuwani waa dareenkeyga ku saabsan Rom Nougat-kii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Rom A oo aan kuu soo bandhigay usbuucii hore isla halkan.
Rasmi LinageOS haddii ay u oggolaato inuu ciyaaro Pokemon Go iyo codsiyada aan ka shaqeynin saldhigyada xididaysan
Haddii aad ka fekereysay inaad cusbooneysiiso terminal-kaaga LinageOS waxaad horeyba u laheyd hal sabab oo dheeri ah taasna waa in LinageOS ay hadda kuu oggolaaneyso inaad ku ciyaarto Pokemon Go.
Rasmiga rasmiga ah ee Android Nougat ROM ee Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Waxaan ku baraynaa sida loo rakibo talaabo talaabo
Waxaan ku baraynaa inaad rakibo talaabo talaabo ah talaabada koowaad ee rasmiga ah ee Android Nougat Rom ee Samsung Galaxy S6 Edge Plus si aad marka hore ugu raaxeysato.
Romka ugu fiican ee Xusuusin 5, dekedda Note 7 ee Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Maanta waxaan kuu keenayaa waxa noqon kara Romkii ugu fiicnaa ee loo sameeyay Xusuusin 5, dekedda Note 7 ee aan ku barayo inaad ku rakibto Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Sida loo cusbooneysiiyo LG G3 ilaa Android 7.1.1 (nooca D855)
Maanta waxaan ku tusineynaa talaabo talaabo ah sida loo cusbooneysiiyo LG G3 ilaa Android 7.1.1 Nougat, oo ay ku jiraan fiidiyow sharraxaad leh iyo xiriiriye wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku hesho.
Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 7.1.1. (Qaabka D802)
Maanta waxaan ku baraynaa inaad cusboonaysiiso LG G2 ilaa Android 7.1.1 si aan rasmi ahayn ugana mahadceliso Roms-ka mashruuca LnageOS ama waxa ku soo kordha Cyanogenmod.
Inbadan oo LineageOS ROM ah ayaa loo siidaayay Nexus 6P, 5X, Nextbit Robin iyo inbadan
Waxay umuuqataa in LineageOS ay midab badan qaadaneyso iyadoo la daabacayo taxane ah ROM-yada loo heli karo boosteejooyinka kala duwan gaar ahaan.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 7.1 nooca GT-I9300
Maanta waxaan sharxayaa talaabo talaabo ah sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 7.1 Nougat. Tabobarku wuxuu ansax yahay nooca GT-I9300
Rom-ka ugu fiican ee loo yaqaan 'Galaxy S6 Edge Plus' waa nooca ugu dambeeya ee NoNaMeRom V9
Wax kasta oo aniga ila ah waa Rom ugu fiican ee Samsung Galaxy S6 Edge Plus ayaa na siiya sidoo kale waxaan sharxayaa habka been abuurista Rom NoNaMe V9
Google wuxuu sameeyaa ADB iyo fastboot si gooni ah looga heli karo Android Studio iyo SDK
Laga bilaabo maanta waxaad awood u yeelan doontaa inaad kala soo baxdo ADB iyo fastboot server-ka Google halkii aad ka soo dagsan lahayd dhammaan megabeytyada 'Studio' Android 'iyo' SDK '.
Hadda waad soo dejisan kartaa ROMA-ga aan rasmiga ahayn ee aan rasmiga ahayn
Waxaad hadda kala soo bixi kartaa ROM-yada aan rasmiga ahayn ee aan rasmiga ahayn ee loo yaqaan 'Lineage OS', oo kala wareegaya wixii ka dhacay CyanogenMod ee ku xirnaa Android.
Pixel iyo Pixel XL waxaa laga yaabaa inay leeyihiin ROOT sida ay xaqiijisay Google lafteeda
Xanta ayaa soo baxday in Pixels aysan lahaan karin mudnaanta ROOT, laakiin hadda waa Google ay xaqiijisay inay yeelan doonaan
U rogida Samsung Galaxy S6 Edge Plus Galaxy Note 7. CAJIIB !!
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo beddelo Samsung Galaxy S6 Edge Plus oo loo beddelo Galaxy Note 7 iyada oo loo marayo Rom Port oo cusub oo Samsung Galaxy Note 7 cusub ah.
Bulshadu waxay durbaba ka shaqeyneysaa Android Nougat AOSP Rom oo loogu talagalay LG G3. Ma rabtaa inaad tijaabiso?
Waxaan horey uheynay Rom AOSP Android Nougat-kii ugu horeeyey ee LG G3, ugu yaraan si tijaabo ah inkastoo xaalad aad u horumarsan.
ZTE wuxuu soo bandhigayaa Axon 7 mini oo leh shaashad dhan 5,2 ″ Full HD, 3GB oo RAM ah iyo 32GB oo ROM ah € 299
ZTE wuxuu ku dhawaaqay ZTE Axon 7 Mini oo leh shaashad 5,2 ah, 3GB oo RAM ah iyo 32GB oo ah xasuusta gudaha oo ah for 299. Taleefan weyn oo loogu talagalay "mini".
Android 7.0 beta ROM oo loogu talagalay daadinta Huawei P9
Haddii aad haysatid Huawei P9 waad joojin kartaa XDA si aad u soo dejiso beta ROM-ka Android 7.0 Nougat oo ay ku jiraan EMUI 5.0, lakabka la cusbooneysiiyay.
LG G2-gaaga u rogo Nexus leh 'AOSP Rom' ugu fiican xilligan
Maanta waxaan ku baraynaa inaad LG G2-gaaga u rogto Nexus 100 x 100 adoo iftiiminaya AOSP Rom-ka ugu fiican xilligan.
Rom ugu wanaagsan ee xilligan loogu talagalay LG G2, moodooyinka D800, D802, D805 iyo D806
Maanta waxaan soo bandhigayaa waxa aniga ii ah shaki la'aan waa Rom ugu fiican xilligan LG G2, Rom oo ansax u ah moodooyinka d800, d802, d805 iyo d806.
Paranoid Android wuxuu ku soo laabanayaa culeyska nooca 6.0
Waxba lagama ogeyn Paranoid Android muddo dheer tan iyo markii qeyb ka mid ah kooxda ay u wareegeen OnePlus; hadda waxaan haynaa 6.0.
Romka ugu fiican Samsung Galaxy S6 Edge Plus waxaa loo yaqaan NoNaMe Rom v5, waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo !!
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo Rom-ka ugu wanaagsan Samsung Galaxy S6 Edge Plus, oo ah fiidiyow tallaabo-tallaabo ah iyo casharro fiidiyoow ah oo ku saabsan wax kasta oo ay na siiso NoNaMe.
N&N Rom Android 6.0 oo loogu talagalay LG G3, mid ka mid ah ROM-yada ugu fiican xilligan LG G3-gaaga
Maanta waxaan kuu keenaynaa mid ka mid ah xusuusta Roms ee xilligan caalamiga ah LG G3 D855 iyo habka rakibaadda tallaabo-tallaabo ah.
Sida loo rakibo Mokee OS LG G3 International. Android 5.1.1
Haddii dhowr saacadood ka hor aan soo bandhigo waxa aniga ii ah midka ugu fiican Android 6.0 Rom isaga ...
Android 6.0 Rom ee ugu wanaagsan LG G2 waa Rom ka socda kooxda Mokee OS waana wax lala yaabo. Waxaan ku baraynaa sida loo rakibo
Maanta waxaan leeyahay sharaf weyn iyo farxad aan kuu soo bandhigo aniga, shaqsiyan, shaki la’aan waa midka ugu fiican Android 6.0 Rom ee loogu talagalay qaabka LG G2 D802.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marshmallow
Casharkaan cusub ee wax ku oolka ah waxaan ku baran doonaa sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marshmallow talaabo talaabo ah.
Fikradda 'Marshmallow' ee Sony waa Tusaale ka mid ah waxa ay tahay inay Android ahaato
Sony wuxuu garaacayaa badhanka saxda ah fikradda Marshmallow waxay ku tijaabineysaa Xperia Z3 iyo Z3 Compact
Xiaomi wuxuu xannibayaa bootloader-ka Redmi Note 3, kuwa soo socdaa waxay noqon doonaan Mi 4c iyo Mi Note Pro
Xiaomi, marka laga reebo xannibaadda bootloder-ka ee 'Redmi Note 3', waxay sidoo kale ku sameyn doontaa Xiaomi Mi 4c iyo Mi Note Pro, in kasta oo ay bixin doonto hab lagu furo
Sida loo cusbooneysiiyo LG G3 ilaa Android 6.0.1 Marshmallow
Maanta waxaan ku tusinaynaa tallaabo-tallaabo iyo caawimaad fiidiyoow ah, sida loo cusbooneysiiyo LG G3 ilaa Android 6.0.1 Marshmallow mahadnaqa CM13 nightlis.
Romka ugu fiican LG G3 waa AOSP Rom oo loo yaqaan XenonHD
Maanta waxaan sharxeynaa habka rakibaadda ee waxa aniga aniga ah Rom ugu fiican ee LG G3 model caalami ah D855, oo ah AOSP Rom oo ku saleysan Cyanogenmod 12.1 oo loo yaqaan 'XenonHD'.
Rom ugu fiican ee LG G3: NovaStock waxqabadka cajiibka ah iyo batteriga
Maanta waxaan kugula talineynaa oo ku barineynaa inaad rakibato waxa ugu fiican Rom ee loogu talagalay LG G3 qaabka caalamiga ah d855
Haddii aad leedahay LG rujin waxaad hadda rakibi kartaa Android 6.0
Ragga ku jira XDA waxay hadda sii daayeen dhisme u oggolaanaya dadka isticmaala LG G4 bilaash ah inay u cusboonaysiiyaan Android 6.0M
MIUI 7 ayaa adduunka oo dhan lagu soo bandhigay beta ROM oo la heli karo Ogosto 24
Hugo Barra ayaa loo igmaday kooxda MIUI si ay u soo bandhigaan nooca 7 ee cape-ka caanka ah ee caanka ah ee wax badan siiyay shirkad soo saaraha.
Soo dejiso oo rakib Sony 'Concept for Android' ROM on the Xperia Z3
Laga soo bilaabo XDA ROM-kan ayaa laga sii daayay oo wata Sony cusub oo loogu talagalay boosteejooyinkiisa 'Concept for Android' waana taas lafteeda Pure Android.
Romka ugu fiican ee loogu talagalay Lenovo K3 Note waa AOSP Rom oo ka socda Xancin
Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ku baro oo aan ku baro sida loo rakibo Rom ugu fiican ee loogu talagalay Lenovo K3 Note.
Sida loo cusbooneysiiyo Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1 adoo adeegsanaya Rom la kariyey oo ku saleysan dhismaha rasmiga ah ee 1526
Maanta waxaan ku tusineynaa nidaamka si aad u cusbooneysiiso Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1 talaabo talaabo iyo muuqaal ah.
Dareen xasaasi ah !! Rom Evomagix Stock 30E loogu talagalay LG G2. Naxdin Rasmi ah !!
Maanta waxaan kaaga tagayaa habka rakibaadda ee waxa aniga shaqsiyan aniga haatan ah waxa ugu fiican Rom Lollipop, Rom Evomagix Stock 30E ee LG G2.
Port Sensation Port LG G4 loogu talagalay LG G2 ChelozTeam UX 4.0 Cajiib !!
Maanta waxaan kugula talineynaa oo ku barineynaa sida loo rakibo Port LG G4 xiisaha leh LG G2
(Dib loo cusbooneysiiyay) Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ilaa Android 5.1.1 Lollipop
Maanta waxaan ku tusineynaa habka saxda ah ee loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ilaa Android 5.1.1 Lolllipop oo waxaan nolol cusub ugu siin doonnaa terminaalkan xiisaha leh ee Android.
Cajiib ah !! Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7 ilaa Android 5.1.1 Lollipop (qaabka P1000)
In kasta oo ay u muuqan karto wax aan caadi ahayn, maanta waxaan ku tusinaynaa tallaabo tallaabo ah sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7 Android 5.1.1
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung galaxy S3 ilaa Android 5.1.1
Maanta waxaan ku tusi doonaa sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 illaa Android 5.1.1 iyada oo ay ugu mahadcelineyso dareenka Rom Lollipop ee qaabkeedii ugu dambeeyay ee ay abuureen Kooxda Soo-kicinta Remix.
[Fiidiyow] Sida dib loogu ifiyo Lollipop Rom ku saleysan midka rasmiga ah ee LG G2
Casharradan soo socda oo ay taageerayaan fiidiyow tallaabo-tallaabo ah ayaan ku tusi doonaa sida dib loogu iftiimiyo rasmiga ah Android Lollipop Rom ee LG G2.
Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa 5.1.1 Lollipop
Maanta waxaan kugula talinayaa Rom ugu fiican inaad cusboonaysiiso LG G2 ilaa Android 5.1.1 Lollipop marka lagu daro barashada dhammaan astaamaheeda iyo habka rakibidda iyo biligleynaya.
LG G2: Sida Loogu Noqdo Kit Kit ama AOSP Rom laga bilaabo Android Lollipop
Maanta waxaan u sharraxayaa tallaabo tallaabo u adeegsadayaasha adeegsada LG G2: Sida loogu noqdo Kit Kit Rom Rom
Habka ugu wanaagsan ee loo cusbooneysiin karo LG G2 si rasmi ah Android Lollipop
Maanta waxaan ku tusayaa sida ugu wanaagsan ee LG G2 loogu cusbooneysiin karo Lollipop-ka rasmiga ah ee loo yaqaan 'Android Lollipop' iyadoo aan lagaa lumin soo kabasho ama xidid, taasna waxaa ugu mahadcelinaya Rom-kan dareenka leh ee ka socda Evomagix.
Barnaamijka 'Paranoid Android Google Apps' waa la soo nooleeyay
Bishaaro wanaagsan oo loogu talagalay dhammaan kuwa jecel inay ku dhejiyaan ROM-yada aaladooda Android iyo taasi waa, Paranoid Android Google Apps dib ayaa loo soo nooleeyay.
The OnePlus One's ROM-kiisa gaarka ah, OxygenOS, ayaa hadda la heli karaa
OxygenOS, ROM-ka uu sameeyay OnePlus oo si gaar ah loogu talagalay qalabkaaga OnePlus One, ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo.
Paranoid Android waxay macsalaameyneysaa barnaamijyadeeda Google
Kooxda soo saareyaasha Paranoid Android ayaa ku dhawaaqay inay joojin doonaan taageerida barnaamijyadooda Google Apps.
[ROM] Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android Official Lollipop iyadoo la adeegsanayo Rom Cook
Maanta waxaan kuu keenaynaa mid ka mid ah dariiqooyinka ugu wanaagsan ee lagu cusbooneysiin karo LG G2 ee loo yaqaan 'Android Lollipop official Stock', wadada ma ahan mid kale oo aan ahayn iyada oo loo marayo Rom la kariyey oo ku saleysan qalabka rasmiga ah ee Android 5.0.1 LG Lollipop
[Video] LG G2: Sidee loogu noqdaa Kit Kat Rom rasmi ah oo ka socda Android Official Lollipop iyada oo aan loo baahnayn Qalabka Flash
Sida loogu soo noqdo LG G2 D802 ee ka soo baxa Android Lollipop-ka illaa rasmiga ah ee loo yaqaan 'Kit Kit' iyada oo aan loo baahnayn Qalabka Flash iyo iyada oo aan luminin Soo-kabashada ama xididka.
[Fiidiyow] Sida loo rakibo CM11 Xiaomi RedMi Note 4G oo leh Xperience Note by Xancin
Sida loogu rakibo CM11 barnaamijka 'Xiaomi RedMi Note 4G' talaabo talaabo ah iyada oo ay ugu mahad celineyso Xancin labada shirkadood ee mobile mobile.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ilaa Android Lollipop
Maanta waxaan sharxayaa talaabo talaabo ah sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ee loo yaqaan 'Android Lollipop' taas oo ay ugu wacan tahay dekedda CM12, taas oo fursad labaad siin doonta qalabkan xiisaha leh ee Samsung.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android Lollipop
Maanta waxaan sharxayaa sida nolol cusub loogu siiyo terminal-kaaga Android waxaanan ku tusayaa sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android Lollipop adoo adeegsanaya CM12.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S4 ilaa Android Lollipop adoo adeegsanaya CM12
Maanta waxaan sharxayaa sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S4 ilaa Android Lollipop iyadoo la adeegsanayo rasmiga rasmiga ah ee ROMs Android 5.0 Nightlys oo ka socda CM12.
Sida loo cusbooneysiiyo LG G3 ilaa Android 5.0 CM12 [Model D855]
Maanta waxaan sharxayaa sida loo cusbooneysiiyo LG G3 ilaa Android 5.0 Lollipop iyadoo la adeegsanayo Cyanogenmod 12, CM12
Sida loo cusbooneysiiyo LG G2-kaaga Android 5.0 adoo adeegsanaya Cyanogenmod 12
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 5.0 mahadsanidiisa CM12
Naqshadeynta Maaddadu waxay u timaaddaa CyanogenMod 12 oo leh barnaamij fariin cusub iyo muusig muusig ah
CyanogenMod 12 ayaa la sii deyn doonaa dabayaaqada sanadkaan wuxuuna la yimid Qalabka Naqshadeynta, iyo naqshadaynta farriimaha iyo barnaamijyada muusigga
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 2 ilaa Android Lollipop
Cashar ku qaad wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu cusbooneysiiso Samsung Galaxy note 2 illaa Android Lollipop
LiquiSmooth, Rom Android 5.0 Lollipop loogu talagalay LG G2 (dhammaan noocyadeeda)
Halkan waxaad ku haysataa midka aragtidayda shaqsiyadeed ay tahay tan ugu fiican Android 5.0 Lollipop Rom ee LG G2 dhammaan noocyadeeda.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S5 ilaa Android Lollipop adoo adeegsanaya CM12
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S5 ilaa Android Lollipop iyada oo loo marayo Rom Romyan Cyanogenmod 12 Alpha ee ugu horreeya
Sidee si aan rasmi aheyn loogu cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy Note 3 ilaa Android Lollipop
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 3 talaabada talaabada ah Android Lollipop
Sidee si aan rasmi aheyn loogu rakibaa Android Lollipop-ka Samsung Galaxy S4
Waxaan horeyba uheysanay Romkii ugu horeeyay ee gobolka Alpha ee Android Lollipop ee Samsung Galaxy S4 nooca caalamiga ah GT-I9505.
Android 5 Lollipop Roms ee Nexus 4, 5, 7, 10 iyo Xperia Z
Soosaarayaasha XDA, noo keen Rom kii ugu horreeyay ee cusbooneysiinta nidaamka qalliinka Google, Android 5 Lollipop, hadda waa tijaabo.
LG G2 Roms: Miui V5 4.10.24 oo ku saleysan saamiga asalka ah ee LG ee D80220C
Halkan waxaad ku haysataa fiidiyowga iyo dhammaan nidaamka rakibida si aad u soo dejiso oo aad isugu daydo Miui V5 4.10.24 iyada oo ku saleysan Stock D80220C ee LG G2.
CyanogenMod wuxuu leeyahay cillad nabadgelyo oo khatar ah
CyanogenMod iyo ROMS-kiisa la soo saaray waxay leeyihiin dallo amni oo khatar ah oo u oggolaaneysa marin u helka taleefankaaga casriga ah
Sony waxay ku ciyaartaa suurtagalnimada keenista Android saafi ah qalabkeeda dhamaadka sare
Haddii Sony ay bilaabi lahayd boosteejooyinkeeda iyada oo ikhtiyaar u ah inay ku rakibaan Android saafi ah, hubaal waxay ku guuleysan doontaa kalsoonida isticmaaleyaasha cusub
Ku rakib romar adoo adeegsanaya Chrome adigoo u mahadcelinaya ChromeADB
Rakibaadda roms-ka oo ay ugu mahadcelineyso server-ka ADB ayaa horay u sii socday laakiin wali way ku adag tahay kuwa cusub, ChromeADB wuu fududeeyaa oo si garaafiyan ah ayuu u sameeyaa.
Roms LG G2: Ku rakibida iyo tijaabinta 7Rom Port ee LG G3
Maanta qaybta Roms LG G2 waxaan rabnaa inaan ku tusno sida loo rakibo 7Rom, oo ah dekedda LG G3 iyo sidoo kale bootkeeda koowaad iyo astaamaha ugu muhiimsan.
Rom-ka ugu wanaagsan LG G2 waxaa loo yaqaan daruuro oo waa Dekedda LG G3
Halkan waxaan kaaga tagayaa wixii lagu balamay ee fiidiyowga-tijaabada ah ee LG G2 vs LG G3, Romka ugu fiican LG G2 ee aan cid kale ahayn dekedda LG G3 ee ay samaysay kooxda Cloudy G3.
Sida loo rakibo Rom ka mid ah OnePlus One ee LG G2-ga caalamiga ah
Halkan waxaad ku haysaa dhammaan faylasha iyo habka rakibaadda oo lagu sharxay talaabo talaabo ah si loo rakibo OnePlus One Port ee caalamiga ah LG G2.
[ROM] Sida loogu rogo LG G2 LG G3
Halkan waxaad ku haysataa fiidiyowga iyo qaabka rakibaadda ee mid ka mid ah LG G3 ugu fiican ee la xardhay iyo hab wanaagsan oo loogu beddelo LG G2 LG G3.
Sony waxay sii deyneysaa bootloader-ka qalabkeeda Xperia
Sony waxay go’aansatay inay sii deyso bootloader-ka aaladeeda, iyadoo siineysa tas-hiilaad cidii dooneysa inay sameyso, maadaama horay loogu sameeyay Motorola's Moto G
Paranoid Android wuxuu sii daayaa Nooca 4.5 Alpha 1 oo leh isdhexgalka barnaamijyada 'Android L Recent Apps'
Isku xidhka barnaamijyada 'Android L' dhawaanahan wuxuu u muuqdaa mid aad ugu eg qaabka alfa ee Paranoid Android 4.5
[APK] Miui Khibrad ama sida loo tijaabiyo Rom Miui iyada oo aan loo baahnayn in xidid ama wax la ifiyo
Halkan waxaad ku haysataa xirmooyin codsiyo ah oo lagu tijaabinayo Khibradda Miui adigoon xidid noqon, oo aanad shidin waxbaba.
Ka hawlgal xulashooyinka horumarinta ee 'Android Wear'
Waxaan ku tusineynaa sida loo kiciyo fursadaha horumarinta ee ku jira Android Wear si aad ugu furto saacaddaada casriga ah suurtagalnimada rakibidda ROM-yada
Sida loo xaliyo dhibaatada qasabka lagu xiro goobaha ka dib markii la cusbooneysiiyo Rom Cyanogenmod
Halkan waxaad kuheleysaa dayactirka fudud si aad uxalliso dhibaatada xiritaanka qasabka ah ee goobaha kadib markaad cusbooneysiiso Rom Cyanogenmod.
Sida loo rakibo Gohma ROM-ka LG G Watch
Gohma ROM waa nidaamkii ugu horreeyay ee ROM ee loo yaqaan 'Android Wear' iyo kan ugu horreeya ee loogu talagalay 'LG G Watch' kaas oo hagaajiya batariga iyo waxqabadka guud ee saacadda.
Eeg sida Android L mahad Xposed
Hayso shaxanka garaafka ee 'Android L' adigoon u baahnayn inaad bedesho romska mahadnaqa Xposed Framework iyo GELS, moduleka 'Xposed' ee beddelaya Android-kaaga.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7, qaabka P1000 ilaa Android 4.4.4
Marka xigta waxaan sharxayaa dhammaan faahfaahinta si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7 ilaa Android 4.4.4 KitKat sida aad ku arki karto fiidiyowga fiidiyowga saxda ah.
Nooca ugu dambeeya ee Paranoid Android 4.4 hadda waa la heli karaa
Nooca ugu dambeeya ee Paranoid Android 4.4 ayaa hadda loo heli karaa in laga soo dejiyo websaydhka qaabkan xiisaha leh ee ROM
CyanogenMod wuxuu ku darayaa barnaamijyadooda la ilaaliyo, ogeysiisyada sabeynaya iyo inbadan
CyanogenMod waxay u keentaa adeegyo iyo barnaamijyo dheeri ah ROM-keeda kale ee cajiibka ah ee amniga guud iyo ogeysiisyada
CyanogendMod wuxuu soosaarayaa lix nooc oo cusub si uu kuugu habeeyo ROM-kaaga Play Store
CyanogendMod wuxuu soo bandhigayaa lix nooc oo cusub si loogu helo u habeyn dheeri ah dadka isticmaala ROM-keeda
Ka taxaddar, ha rakibin beta-kii ugu dambeeyay ee WhatsApp haddii aad terminal ku leedahay Rom Cocinada
Haddii aad tahay isticmaale leh Android mahadnaq badan oo Roms ah oo la kariyey oo la heli karo, waa inaad ka taxaddartaa inaadan rakibin ugu dambeyntii WhatsApp beta.
Ka bood Samsung! iyo cusbooneysii Galaxy S3 mini illaa Android 4.4.3
Halkan waxaad kuheleysaa cashar talaabo-tallaabo ah oo dhameystiran si aad u aragto sida Galaxy S3 mini loogu cusbooneysiiyo Android 4.4.3, iyadoon loo eegin inta Samsung ay u maleyn karto.
Cusboonaysii LG G2 ilaa Android 4.4.3 adoo adeegsanaya OmniRom
Maanta waxaan ku tusayaa sida loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 4.4.3 iyada oo loo marayo OmniRom, oo ah mid ka mid ah AOSP ROM-yada ugu fiican ee aan ka heli karno G2-keena.
Sida loo cusbooneysiiyo iFive Mini 3GS ilaa Android 4.4
Nidaam aad u fudud oo la raaco haddii aan rabno inaan yeelano Android 3 iFive Mini 4.4GS.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S4.4.3 International (GT-I3) illaa Android 9300
Waxaan cometo talaabo talaabo talaabo ah halkaasoo lagugu siinayo wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u cusbooneysiiso Samsung Galaxy S4.4.3 ilaa Android 3.
Ku rakib Xperia Z2 Walkman codsi kasta oo ah Deodexed Rom
Halkan waxaad ku haysaa zip ka mid ah codsiga Walkman ee daboolka Xperia Z2 si loogu isticmaalo Roms Deodexed.
Miui V5 Isbaanishka loogu talagalay LG G2 horeyba waa run
Halkan waxaad ku haysaa Rom Miui V5 ugu horreeya ee Isbaanishka ee LG G2 oo si buuxda u shaqeynaya iyo 100 x 100 oo shaqeynaya.
Ku amri Google Hadda amarada codka OmniRom
OmniRom waxay dooneysaa inay siiso qallooca amarrada codka ee Google Now iyo, sida aan ka arki karno fiidiyowga, waxay umuuqataa inay guuleysteen.
Roms loogu talagalay LG G2: ArdeDevTeam V2 Rom Kit Kat xilligan
Halkan waxaad ku leedahay mid ka mid ah ROM-yada ugu wanaagsan LG G2, ArdeDevTeam V2 oo leh shaqooyinka Lg G Pro 2 iyo G Flex.
Si rasmi ah oo rasmi ah u cusbooneysii Samsung Galaxy S3 ilaa KitKat oo leh AOSP Rom kii ugu fiicnaa xilligan
Go'aanka Samsung ee ah in aan kor loo qaadin S3-ka Android KitKat maanta waxaan ku tusayaa sida si rasmi ah loogu casriyeeyo Samsung Galaxy S3 KitKat.
LG G2-gaaga u beddelo Nexus 5 oo fiitamiin leh Madhi Rom
Marka xigta waxaan ku tusayaa sida aad LG G2 ugu bedesho Nexus 5 oo fiitamiin leh adoo adeegsanaya Rom Kit Kat AOSP ama Android saafi ah oo la yiraahdo Madhi Rom.
Rom Caawiye V4 Plus. Rom Kit Kit ugu fiican LG G2
Maanta waxaan rabaa inaan kaaga tago habka rakibaadda ee loogu talagalay isticmaaleyaal badan kan ugu fiican Android Rom Kit Kat ee LG G2.
Samsung Galaxy S5 ROM wuxuu adeegsadaa 8GB oo keyd ah oo gudaha ah
Nooca 16GB ee Galaxy S5, kala badh keydinta gudaha waxaa qaadan doona ROM, sidaa darteed kaarka microSD ayaa loo baahan doonaa si loo ballaariyo.
Samsung Galaxy S4, Rom Miui v5 Android 4.2.2 waxaa qoray Muchopoli83
Halkan waxaan kaaga tagayaa Romkan xiisaha leh mahadnaqa shaqada Muchopoli83 ee Samsung Galaxy S4 iyo dhammaan faa'iidooyinka khibrada Miui V5.
Miui Rom V5 ee Samsung Galaxy S3
Halkan waxaad ku haysaa xiisahaas Rom Miui V5 ee Samsung Galaxy S3. Rom A waxaa abuuray kuugga xiisaha leh ee Muchopoli83 oo ka socda shirkadda HTCmania.
Miui wuxuu xaqiijinayaa cusbooneysiinta Roms-keeda ilaa Android 4.4 Kit Kat bishii Febraayo 2014
Warku wuxuu nooga imaanayaa Sun Peng, injineerka guud ee Miui, in Roms-kooda la cusbooneysiin doono Android 4.4 Kit Kat bisha Febraayo ee soo socota.
Samsung Galaxy S4: Cusbooneysiin rasmi ah oo cusub oo loogu talagalay Android 4.4.2 ayaa la heli karaa
Halkan waxaan ku haynaa cusbooneysi rasmi ah oo kale oo loogu talagalay Android 4.4.2 Kit Kat oo ah tijaabo oo kaliya iyada oo loo marayo Odin ee Samsung Galaxy S4 model GT-I9505.
Qalabaynta Cyanogenmod ayaa hadda loo heli karaa MAC
Ragga ku jira Cyanogenmod waxay hadda sii daayeen nooc cusub oo ah Qalabaynta Cyanogenmod oo loogu talagalay MAC OSX.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7 P1000 ilaa Android 4.4 Kit Kat
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u cusbooneysiiso Samsung Galaxy Tab 7 model P1000 ilaa Android 4.4.2 Kit Kat.
Samsung Galaxy Note 3, cusbooneysiin rasmi ah oo loogu talagalay Android Kit Kat 4.4.2
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u cusbooneysiiso Samsung Galaxy Note 3 N9005 si rasmi ah Android 4.4.2.
Samsung Galaxy S4, ku cusbooneysii Android 4.4.2 adoo adeegsanaya Google Edition
Halkan waxaad ku haysataa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku cusboonaysiiso Samsung Galaxy S4 nooca ugu dambeeyay ee Android iyada oo loo marayo daboolka Rom ee Samsung Galaxy S4 Google Edition.
Samsung Galaxy S3, Cusboonaysii Android 4.4.2 adoo adeegsanaya Cyanogenmod 11
Halkan waxaad ku haysaa dhammaan faahfaahinta si aad u cusboonaysiiso Samsung Galaxy S3 si aan rasmi ahayn Android 4.4.2 Kit Kat oo leh Cyanmogenmod 11 Rom ee ugu dambeeyay.
Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 4.4.2 Kit Kat adoo adeegsanaya ParanoidAndroid
Tabobar tallaabo-tallaabo ah iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ku cusboonaysiiso LG G2 illaa Android 4.4.2 Kit Kat oo ka socda ParanoidAndroid.
Talooyin maskaxda lagu hayo ka hor biligleynaya terminal-ka Android
Taxaddarrada Main iyo talooyin in la tixgeliyo ka hor biligleynaya aad terminal Android.
Samsung Galaxy S3, Android 4.3 Open Europe firmware oo diyaar ah oo laga soo dejisan karo
Halkan waxaad ku haysataa qalabkii ugu dambeeyay ee Android 4.3 Open Europe ee loogu talagalay nooca Samsung Galaxy S3 GT-I9300.
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.4 Kit Kat oo uu qoray Mokee
Halkan waxaad ku haysataa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku cusboonaysiiso Samsung Galaxy S nooca GT-I9000 nooca ugu dambeeyay ee Android 4.4.1 Kit Kat adoo adeegsanaya Mokee OS.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ilaa Android 4.4 Kit Kat oo leh CyanogenMod 11
Halkan waxaad ku leedahay cashar tallaabo-tallaabo ah oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u cusbooneysiiso nooca Samsung Galaxy S2 GT-I9100 nooca ugu dambeeyay ee Android 4.4 Kit Kat
Samsung Galaxy S3, Rom Android 4.4.1 Kit Kit daabacaaddiisa 1.4
Halkan waxaan kuugu keenayaa Romkan xiisaha leh ee Samsung Galaxy S3 model GT-I9300 oo ku saleysan Android 4.4.1 Kit Kat.
Samsung Galaxy S4, Rom Android 4.4 Google Edition GT-I9505G daboolka
Halkan waxaan kuugu keenayaa dekedda rasmiga ah ee Google Edition Rom ee Samsung Galaxy S4 oo leh Android 4.4 Kit Kat.
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.4 Kit Kat krt16s
Halkan waxaad ku leedahay muuqaal qurux badan oo Android 4.4 Kit Kat Rom oo loogu talagalay Samsung Galaxy S nooca GT-I9000.
LG G2, Android 4.2.2 Rom oo leh shaqeynta LG G-Flex
Halkan waxaan kuugu keenayaa habka lagu rakibo Android 4.2.2 Rom oo ku saleysan qalabka rasmiga ah ee LG kaas oo ay ku jiri doonaan howlaha cusub ee LG G-Flex ee LG G2.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 2 ilaa Android 4.4 Kit Kat oo leh OmniRom
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u cusbooneysiiso Samsung Galaxy Note 2 illaa Android 4.4 Kit Kat si aan rasmi ahayn ugu mahad celiso OmniRom.
Samsung Galaxy Note 1, oo cusbooneysiineysa Android 4.4 Kit Kat oo leh OmniRom
Casharro si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 1 ilaa Android 4.4 Kit Kat adoo adeegsanaya OmniRom
OmniRom Android 4.4 Kit Kat oo loogu talagalay Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad ugu cusbooneysiiso Samsung Galaxy S3-kaaga Android 4.4 Kit Kat oo leh OmniRom.
OmniRom waxay bixisaa taageero cusbooneysiin ah Android 4.4 Kit Kat si aan rasmi ahayn
OmniRom waxay bixisaa taageero 15 terminaal Android ah oo awoodi doona inuu cusbooneysiiyo Android 4.4 Kit Kat illaa habeennadiisa.
Samsung Galaxy Note 1 waxay lahaan doontaa Android 4.4 Kit Kat
Ku dhammaystir casharro wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u cusbooneysiiso Samsung Galaxy Note 1 model GT-N7000 illaa Android 4.4 Kit Kat adoo adeegsanaya ParanoidAndroid 4.0.
Samsung Galaxy S4, sida loogu cusbooneysiiyo Android 4.4 Kit Kat si rasmi ah
Cashar buuxa ku dhammaystir wax kasta oo aad u baahan tahay si aan rasmi ahayn u cusboonaysiin tusaalaha Samsung Galaxy S4 GT-I9505 illaa Android 4.4 Kit Kat.
Cusbooneysiinta Android: U cusbooneysiin si rasmi ah ama u sug cusbooneysiinta rasmiga ah ee aan waligood imaan?
Siyaasadda cusbooneysiinta cusbooneysiinta Android ayaa iga dhigtay inaan qoro boostadan si aan u sharraxo faa'iidooyinka iyo qasaaraha ka jira cusboonaysiinta si aan rasmi ahayn.
Sida si rasmi ah loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 4.3.1
Tallaabo tallaabo tallaabo ah iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ku cusboonaysiiso LG G2 illaa Android 4.3.1 adoo adeegsanaya Rom Nightly oo ka socda CyanogenMod 10.2.
Xalka khaladka ka soo kabashada markaad isku dayeyso inaad iftiimiso Android 4.4 Kit Kat Rom
Xalka laga helay XDA si aad uhesho Rom Android 4.4 Kit Kat iyada oo aan loo baahnayn in la cusbooneysiiyo Soo-kabashada.
LG Optimus G, Rom CM11 oo aan rasmi ahayn Android 4.4 Kit Kat
Xarago Rom Android 4.4 Kit ah oo loogu talagalay LG Optimus G E975 oo ay taageerayaan fikradaha ku jira shirarka horumarinta ee kala duwan ee Android.
Samsung Galaxy S, Rom MacKay Android 4.4 Kit Kat
Halkan waxaad ku haysaa roman kale oo dareen leh oo ah nooca Samsung Galaxy S dab-damiska ah ee GT-I9000 oo wata Android 4.4 Kit Kat mahadnaqa MacKay.
Samsung Galaxy S4, ProBAM mid ka mid ah kuwa ugu fiican Android 4.3 ROMs
ProBAM waxay u badan tahay inuu yahay mid ka mid ah ROM-yada ugu fiican ee leh Android 4.3 ee aan ka heli karno Samsung Galaxy S4 dhammaan noocyadeeda iyo noocyadeeda.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 2 International ilaa rasmiga ah Android 4.3
Halkan waxaan kuugu keenayaa rasmiga rasmiga ah ee ugu horreeya Samsung Android 4.3 India fimware ee loogu talagalay Samsung Galaxy Note 2 nooca caalamiga ah N-7100.
Sida si rasmi ah loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 4.4 Kit Kat
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 4.4 Kit Kat adoo adeegsanaya Rom Cyanogenmod 11.
Qalabaynta Cyanogenmod hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo
Waxaan horeyba u haysanay CyanogenMod Installer halkan ku habboon Windows oo ku habboon in badan oo ka mid ah kumbuyuutarrada Android.
Samsung Galaxy S, Android 4.4 Kit Kat oo ku jira nooca Alpha
Waxaan horeyba halkan ugu haysanay Romkii ugu horreeyay ee laga heli karo beta-ka dabka aan dabka qabsan karin ee Samsung Galaxy S, oo ah rom ka tirsan kooxda OmniRom.
Samsung Galaxy S3 mini, markii ugu horeysay Rom Android 4.4 Kit Kat ee gobolka Alpha
Waxaan horeyba halkan ugu haysanay Rom 4.4 Kit Kat rom oo ah kii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy S3 mini ee nooca Alpha.
Samsung Galaxy S3, markii ugu horreysay Rom ee nooca Alpha ee leh Android 4.4 Kit Kat
Waxaan horeyba halkan ugu haysanay Rom kii ugu horreeyay ee wata Android 4.4 Kit Kat oo loogu talagalay nooca Samsung Galaxy S3 GT-I9300.
Samsung Galaxy S4, cusboonaysiinta rasmiga ah ee Android 4.3 Isbaanishka bilaashka ah ee hawlwadeenka.
Waxaan horeyba halkan ugu hayney inaan si toos ah u soo dejino oo u cusbooneysiino Odin rasmiga rasmiga ah ee Android 4.3 ee loogu talagalay nooca Samsung Galaxy S4 GT-I9505.
Samsung Galaxy S3, Android 4.3 Rom oo leh dhammaan barnaamijyada Android 4.4 Kit Kat
Mid ka mid ah Roms-kii ugu fiicnaa xilligan loogu talagalay Samsung Galaxy S3 oo laga hirgeliyay CM10.2 iyo codsiyada asalka ah ee Google ee loogu talagalay Android 4.4 Kit Kat.
Sida loo cusbooneysiiyo LG Optimus G ilaa Android 4.4 Kit Kat
Waa kuwan wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u cusboonaysiiso LG Optimus G ilaa Android 4.4 Kit Kat.
Ku soo dejiso Android 4.3 rasmiga ah Samsung Galaxy S3 (oo aan lahayn KNOX)
Soo degso iyo rakibo habka cusub ee Leaked Firmware Android 4.3 ee Samsung Galaxy S3.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Nexus ilaa Android 4.4 Kit Kat
Waxaan horeyba halkan ugu helnay nabadda maskaxda dhammaan isticmaaleyaasha Samsung Galaxy Nexus Maguro, Rom kii ugu horreeyay ee nooca Alpha ee wata Android 4.4 Kit Kat.
Samsung Galaxy S, Android 4.3.1 oo leh Slim Bean
Mid ka mid ah Roms-ka ugu fiican xilligan oo leh Android 4.3.1 loogu talagalay Samsung Galaxy S nooca GT-I9000.
Waa maxay caadada ROM iyo Root?
ROM-ga caadadiisu waxay ahayd niche gaar ah oo dad ah oo leh aqoon iyo macnahoodu in lagu rakibo, laakiin inyar ooyar ...
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S4 ilaa Android 4.3 laakiin aan lahayn KNOX
Asalka Samsung Android 4.3 Rom ee Samsung Galaxy S4 laakiin aan lahayn KNOX
Cyanogenmod wuxuu ka ifayaa Samsung Galaxy Note 3
Dhammaan kuwa raacsan Cyanogenmod ayaa nasiib ku jira tan iyo markii lagu shiday Samsung Galaxy Note 3
Android 4.3.1 on Samsung Galaxy S oo leh Mokee OS
Nooc cusub oo Mokee OS ah oo noo ogolaanaya inaan cusbooneysiino Samsung Galaxy S ilaa nooca Android 4.3.1 oo ah nooca ugu dambeeya ee Android.
Rakibayaha ROM ama sida loo rakibo rooti la beddelay si fudud
ROM rakibayaa waa aalad cusub oo JRummy ah oo kuu oggolaanaysa inaad ku rakibtid roms ka buugga weyn oo aan dhib lahayn.
Samsung Galaxy S4, qalabkii ugu dambeeyay ee Android 4.3 oo xaday
Waxaan horeyba halkan uguheynay qalab cusub oo Android 4.3 ah oo loogu talagalay Samsung Galaxy S4 dabeecad rasmi ah.
Samsung Galaxy S2, Rom ParanoidAndroid 3.99 RC2
Maanta waxaan soo bandhigayaa nooca RC2 ee ParanoidAndroid 3.99 Rom ee Samsung Galaxy S2, oo suurtogal ah inuu yahay midka ugu fiican Android 4.3 Rom ee xilligan.
Samsung Galaxy S, Rom SlimBean Android 4.3 noocyada toddobaadlaha ah
Rom kale oo xamaasad leh oo loogu talagalay terminaalkan dabka ka iman kara ee Samsung, Samsung Galaxy S ee nooca GT-I9000.
Samsung Galaxy S3, Rom crDroid AOSP Android 4.3
Mid ka mid ah Roms-ka ugu fiican xilligan loogu talagalay nooca Samsung Galaxy S3 ee GT-I9300, oo wata Android 4.3 AOSP.
Samsung Galaxy S, Rom Joyos Android 2.3.7 iPhone Style leh codsi FM Radio isku dhafan
Roomahan loogu talagalay Samsung Galaxy S, nooca GT-I9000 wuxuu na siinayaa muuqaal dhammaystiran oo aamin ah nidaamka hawlgalka Apple iOS.
Sida loo isticmaalo GooManager si aad u cusbooneysiiso Romkaaga
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u cusbooneysiiso Romkeena kariyey adoo adeegsanaya GooManager.
Samsung Galaxy S3, Rom oo dareen leh Android 4.3 JellyBam
Halkan waxaan ku soo bandhigayaa shaqadii ugu dambaysay ee ka socota kooxda JellyBam ee Samsung Galaxy S3, oo si buuxda u shaqeynaya Android 4.3-based Rom.
Sida loo cusbooneysiiyo LG Optimus G ilaa Android 4.3
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u cusbooneysiiso LG Optimus G ilaa Android 4.3 adoo adeegsanaya Cyanogenmod 10.2 rom
Samsung Galaxy S3, Rom Android 4.2.2 Waxqabadka Nexus
Romens dareen leh Android 4.2.2 loogu talagalay Samsung Galaxy S3 qaabka Google Motorola X
Laga bilaabo maanta waxaad dhaqaajin kartaa koontada CyanogenMod si aad u hesho terminalka oo aad masaafada xogta uga durugto
Xisaabta CyanogenMod waxay soo bandhigeysaa in laga tirtiro xogta taleefankeena ama laga helo meel fog xitaa bogga rasmiga ee CM.
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka booska LG L3 E400
Casharro wax ku ool ah oo loogu talagalay adoo ku rakibaya romka leh Sdmerge ku jira si loo xalliyo dhibaatooyinka meelaha bannaan ee LG L3 E400.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ilaa Android 4.3
Tabobar-tallaabo tallaabo ah iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad si rasmi ah ugu cusbooneysiiso Samsung Galaxy S2 illaa Android 4.3.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 4.3
Cashar buuxa ku dhammaystir wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku cusboonaysiiso Samsung Galaxy S3 ilaa Android 4.3 adoo adeegsanaya rom la kariyey oo ku saleysan Cyanogenmod 10.2
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S4 ilaa Android 4.3
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u cusbooneysiiso Samsung Galaxy S4 si aad u nadiifiso Android 4.3 oo leh AOSP Google Edition oo ku saleysan rom.
Samsung Galaxy S, sida loo cusbooneysiiyo Android 4.3 oo leh Rom Paranoid 3+
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S nooca GT-I9000 nooca ugu dambeeyay ee Android 4.3 talaabo talaabo ah.
Wax walba oo ku saabsan CyanogenMod Account si loola socdo loona tirtiro xogta taleefankaaga lumay
Koontada 'CyanogenMod' ayaa ku siin doonta ikhtiyaarka aad ku raad-joogto ah una tirtiri karto xogta ku jirta taleefankaaga haddii aad waydo ama ay ku dhammaato gacanta qof kale.
Nidaamka isku dhafan ee Halo 2.0 ee nooca cusub ee Paranoid Android ROM
Waxaad ubaahantahay inaad haysato nooca ugu dambeeya ee Paranoid Android si aad awood ugu yeelatid nooca cusub ee Halo 2.0 iyo shaqooyinka fiican ee ay ku bixiso Android.
CyanogenMod 10.2 ayaa loo siidaayaa aaladaha qaar
Waa marki loogu talagalay CyanogenMod inuu keeno Android 4.3 ROM-kiisa CyanogenMod 10.2, oo loo geeyay aaladaha qaar taasna way ka muuqan doontaa inbadan.
Ku rakibidda Soo-kabashada wax laga beddelay si fudud on badan oo terminal Android
Codsi gebi ahaanba bilaash ah oo fududeyn doona rakibidda Soo-kabashada wax badan laga beddelay ee ku taal bartayada 'Android'
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.2.2 Mako Xperience oo leh Elitemóvil's Linaro
Nooca Samsung Galaxy S ee GT-I9000 ayaa diidaya inuu ka tago adduunka hadda jira ee Android waana la cusbooneysiiyaa mahadnaqa Elite Rom kan cajiibka ah.
Samsung Galaxy S3, sida loo siiyo muuqaalkiisa iyo shaqadiisa Samsung Galaxy S4
Casharradan cusub ee Samsung Galaxy S3, waxaad awoodi doontaa inaad u beddesho Samsung Galaxy S4 cusub muuqaal ahaan iyo hawlo gaar ah.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S ilaa Android 4.2.2 oo leh Cyanogenmod 10.1 RC4
Casharro wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo rakibo nooca RC4 ee Cyanogenmod oo ah nooca Samsung Galaxy S ee GT-I9000
Cyanogenmod 10.1 RC4 ayaa hadda loo heli karaa soo dejin toos ah
Waxaan halkaan ku haynaa noocyada cusub ee Android 4.2.2 ee Cyanogenmod 10.1 RC4 si toos ah loogu soo dejiyo iyo raaxo bilaash ah.
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.2.2 Chameleon OS, hawo nadiif ah oo loogu talagalay Galaxy-kaaga
Rooma cusub oo cajiib ah oo loogu talagalay Samsung Galaxy S nooca dabka aan-dabka lahayn ee GT-I9000, Chameleon OS oo leh astaamo badan oo cusub.
Cyanogenmod 10.1 RC1 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo
Cyanogenmod ayaa hadda sii deysay Musharraxa ugu horreeya ee Siidaynta, ama Cyanogenmod RC1 oo ku saleysan Android 4.2.2 dhowr qalab oo iswaafajinaya
Auto Flasher ROM flash utility, oo ah barnaamij muhiim u ah flash qabatinka
Auto Flasher ROM flash utility waa aalad noo sahlaysa inaan faylasha ka xoqno TWRP
Samsung Galaxy S, JDQ39E Android 4.2.2 rom, soo celinta Elitemóvil
Halkan waxaad kuheleysaa soo noqoshada muddada dheer la sugayay ee kuugga ugu fiican goobta Android ee Samsung Galaxy S, oo leh jaceylkiisa cusub ee ku saleysan Android 4.2.2
Sotmax roms Stock ee Samsung Galaxy S3
Sotmax Rom oo ah nooca Samsung Galaxy S3 ee GT-I9300 waa rom oo ku saleysan saamiyada Samsung oo leh shaqooyin badan oo cusub oo ay aqoonsan tahay Kies.
Samsung Galaxy S, Cyber ​​Rom Android 4.2.2 Galaxy S4
Rom cajiib ah oo loogu talagalay Samsung Galaxy S nooca GT-I9000 oo leh Android 4.2.2 iyo laba dhadhan oo laga kala dooran karo.
Samsung Galaxy S3, ROM MIUI Android 4.1.1 oo ka yimid Muchopoli83
Riko dareen leh Samsung Galaxy S3 ayaa lagu rakibey oo wax laga beddelay muchopoli83 oo ku saleysan Android 4.1.1 oo ku saleysan MIUI V5
Root Backup Root, nandroids-kaaga ayaa kuu haaya daruuraha
Root Backup Root waa aalad nidaam bilaash ah oo noo ogolaaneysa, waxyaabo kale oo badan, si loo sameeyo nuqulo nuqul ah nidaamkaaga Android
Launcher dekedda Samsung Galaxy S4 ee dhammaan qalabka
Waxaan horey u helnay dekedda Launcher-ka cusub ee Samsung Galaxy S4 oo diyaar u ah soo dejin iyo rakibo isla markaana la jaan qaadi kara tiro wanaagsan oo boosteejooyin ah.
Samsung Galaxy S, Neon Kernel V 0.3 ee Android 4.2.1 oo leh taageerada OTG
Sida loo beddelo Kernel-ka Samsung Galaxy S ee ka hooseeya Android 4.2.1 rom la kariyey
Soo dejiso barnaamijyada u gaarka ah Sony Xperia Z
Xirmooyinka codsiyada asaliga ah ee Sony Xperia Z si ay u iftiimiyaan soo kabashada ansax u ah tiro wanaagsan oo ka mid ah qalabka korontada ee Android
Xperia U, Mod Nadiifi AOSP UI
Maanta waxaan kuu keenaynaa qaab lagu rakibo barta barxadda iyo menu-ka AOSP ee ku jira Sony Xperia U. Tan waxaan ku siin karnaa muuqaal cusub mobilkayaga
Maanta waxaan kuu keenaynaa Mod Pack oo loogu talagalay Sony Xperia P si uu kuu siiyo muuqaalka Sony Xperia Z oo ay weheliso barnaamijyadeeda iyo shaqooyinka uu keeno. Soo gal oo iskuday.
Xperia S, Rom XS B-Room nooca 5.1
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa nooca Elroysde XS B-Room ee 5.1 ee loogu talagalay Sony Xperia S, iyada oo ku saleysan rasmiga rasmiga ah ee ugu dambeeyay ee Sony oo ka buuxa habeyn iyo dheecaan.
CyanogenMod Nightlies waxay ku daraysaa PIE Control
Soosaarayaasha CyanogenMod waxay go'aansadeen inay ku daraan PIE Control noocyadooda habeennimo ee romankooda.
Sony Xperia Z, RomAur Cusboonaysiinta Nooca 1.4.1
Maanta waxaan ka soo qaadaneynaa RomAur v1.4.1 ROM ka cunto kariye Auras76 oo loogu talagalay Sony Xperia Z, oo ku saleysan rasmiga rasmiga ah ee ugu dambeeyay ee Sony oo buuxa oo u gaar ah iyo habeyn
Samsung Galaxy S4, muuqaalka nidaamka ayaa diyaar u ah soo dejinta
Waxaan horey u haysanay nidaamka qashinka ama sawirka dhameystiran ee nidaamka Samsung Galaxy S4 si toos ah loogu soo dejisan karo.
Xperia U, Rom JB khibrad ™ v2
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa Divaksh's JB eXperience ™ v2 oo loogu talagalay Sony Xperia U, oo ku saleysan firmware-kii ugu dambeeyay ee rasmiga ah ee Sony oo ka buuxa habeyn iyo dheecaan weyn.
Samsung Galaxy S, Tsunami X rom version cusbooneysiinta 4.7
Waxaan mar horeba halkan ku haynaa nooca ugu dambeeyay ee mid ka mid ah romaska ​​ugu guulaha badan xilligan loogu talagalay Samsung Galaxy S, nooca V4.7 ee Rom Tsunami X.
Shaashadda qufulka ee Sony Xperia Z ee Xperia P-gaaga
Ku rakib shaashaddaada 'Sony Xperia P' shaashadda shaashadda ee ay Sony la timaaddo Jelly Bean ee ku jirta Sony Xperia Z, sii taleefankaaga casriga ah taabasho aad u qurux badan oo casri ah qaabkan.
Samsung Galaxy S3, Rom ReVolt V 4.0 Android 4.2.2 Jelly Bean
Rom kale oo cusub oo loogu talagalay Samsung Galaxy S3 oo ku saleysan koodhka ilaha AOKP iyo nooca Android 4.2.2.
Ku rakib qalabka 'Sony Xperia Z launcher' ee casrigaaga Sony Xperia
Casharro loogu talagalay rakibidda jileeyaha cusub ee Sony Xperia Z ee casrigaaga Sony Xperia, kaas oo aan ku sii hagaajin karno kombuyuutarradeena.
Samsung Galaxy S2, rom Vanilla RootBox 3.9.1 Android 4.2.1
Xasaasiyadda dareenka ee Samsung Galaxy S2 oo ku saleysan furaha asalka u ah Vanilla RootBox oo ah isku darka ugu fiican Cyanogenmod iyo AOKP.
Ku rakib Beats Audio Xperia P iyo Xperia U
Maanta waxaan kuu keenaynaa Mod loogu talagalay codka maqalka Xperia, waa Dre's Beats Audio oo aan ku ciyaari karno barbaraha si loo gaaro cod wanaagsan
Xperia T, Rom Xperia Xiisaha v2.2
Maanta waxaan soo qaadaneynaa 'Recoba Xperia Curiosity v2.2 ROM' oo loogu talagalay Sony Xperia T, oo ku saleysan rasmiga rasmiga ah ee ugu dambeeyay Sony Jelly Bean oo ka buuxa habeyn.
Samsung Galaxy S3, cusbooneysiin aan rasmi ahayn oo loogu talagalay Android 4.2.2 adoo adeegsanaya rom
Rom ugu horreeya ee si buuxda u shaqeynaya Samsung Galaxy S3 oo noo oggolaan doona inaan si rasmi ah ugu raaxeysanno faa'iidooyinka Android 4.2.2
Xperia P, Rom Jelly cream Xperia Z qaabka 2.5
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa Jelly cream Xperia Z style 2.5 oo uu qoray Arthur_1 oo loogu talagalay Sony Xperia P, oo ku saleysan rasmiga rasmiga ah ee ugu dambeeyay Sony firmware oo ka buuxa habeynta.
Samsung Galaxy S, rom Tsunami 4.6 Android 4.2.2 cusbooneysiin Maarso 14
Cusbooneysiin cusub oo Tsunami X 4.6 rom ah oo leh Android 4.2.2 oo loogu talagalay Samsung Galaxy S nooca GT-I9000
Xperia Z, Root iyo Soo kabashada
Casharro ku saabsan sida loo xidido Sony Xperia Z si deg deg ah oo fudud, tan waxaan ku rakibikaraa habab kala duwan, sameynta keydag, rakibo romas, iyo waxyaabo kaloo badan.
Sony Xperia U, Rom Wadarta Xperia V2
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa wadarta guud ee Xperia V2 ee ka socota kooxda Total Xperia ee loogu talagalay Sony Xperia U, iyadoo lagu saleynayo qalabkii ugu dambeeyay ee rasmiga ahaa ee Sony oo dhameystiran u habeyn.
Sony Xperia S, Rom NatureXperiaV3 RC
Maanta waxaan la imaaneynaa DevSxSTeam ROM NatureXperiaV3 oo loogu talagalay Sony Xperia S, oo ku saleysan rasmiga rasmiga ah ee ugu dambeeyay ee Sony firmware 6.1.A.2.55, way ka buuxsan tahay qaabeyn
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X4.5 cusbooneysiinta 9/3/13
Nooca cusub ee Kooxda Tsunami X wuxuu la socdaa Android 4.2.2 wuxuuna ku saleysan yahay lambarka AOKP ee Samsung Galaxy S model GT-I9000
Cyber-shot Mod loogu talagalay Xperia 2012
Tutorial si loo rakibo Qalabka 'Cyber-shot Mod' ee loogu talagalay kamaradda Xperia laga bilaabo 2012. Modkani wuxuu keenaa kordhin cusub oo loogu talagalay kamaradda sida qaabka HDR ee sawirrada.
Xperia T, Root iyo Soo Celinta Jelly Bean
Tabobar si loo xidido oo loo rakibo soo kabashada Sony Xperia T ee leh Jelly Bean Iyadoo tan waxaan ku rakibi karnaa noocyo kala duwan, sameyn karno, rakibi roms.
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.2.2 Xusuusta Kooxda-JB
Kooxda ugu dambeysa ee Remics-JB team rom ee dab-damiska Samsung Galaxy S model GT-I9000
Xperia S, Root iyo Soo kabashada
Casharbarka si loo xidido loona rakibo soo kabashada Sony Xperia S qaab fudud. Tan waxaan ku rakibi karnaa noocyo kala duwan, sameeyn karno, rakibi roms.
Samsung Galaxy S2, HCTRom V6.1 Android Jelly Bean 4.1.2
Maanta waxaan kuu soo bandhigayaa romas xasaasi ah oo laga soo qaatay shirkii HTCmania ee Samsung Galaxy S2 model GT-I9100. HCTRom V6.1 oo wata Android 4.1.2 Jelly Bean
Samsung Galaxy S3, Rom Purelook HD oo ah qaabka Xperia Z
Raaxo dareen leh qaabka Sony Xperia Z ee loogu talagalay Samsung Galaxy S3.
Xperia U, xidid iyo soo kabasho
Casharbarka si loo xidido loona rakibo soo kabashada Sony Xperia U hab fudud. Tan waxaan ku rakibi karnaa noocyo kala duwan, sameeyn karno, rakibi roms.
Xperia P, Root iyo Soo kabashada
Casharbarka si loo xidido loona rakibo soo kabashada Sony Xperia P hab fudud. Tan waxaan ku rakibi karnaa noocyo kala duwan, sameeyn karno, rakibi roms.
Samsung Galaxy S, marka hore Ubuntu OS Rom
Waxaan halkaan u joognaa inaan tijaabino romka cusub ee gabi ahaanba ku saleysan nidaamka cusub ee Canonical Ubuntu OS ee ku shaqeeya Samsung Galaxy S GT-I9000.
Vanilla RootBox Android 4.2.2 dekedda Samsung Galaxy S
Xaqiiqda dhabta ah ee RootBox vanilj daboolida loogu talagalay Samsung Galaxy S, oo leh Android 4.2.2 iyo PIE Control
Vanilla RootBox, Roms Android 4.2.1 oo loo heli karo aalado kala duwan
Vanilla RootBox waa mid ka mid ah kooxaha ugu caansan horumarka Android ee aan ka heli karno dhanka romanka aaladaha Android.
Samsung Galaxy S3, Rom Vanilla RootBox Android 4.2.1 oo leh xakameynta PIE
Mid ka mid ah romasyada ugu fiican xilligan Samsung Galaxy S3, Vanilla RootBox oo wata Android 4.2.1 iyo PIE Control.
CRom Mix V6 waa roomaada leh Android 4.2.2 ee Samsung Galaxy S oo leh qaab hufan oo la mid ah firmware asalka ah ee Samsung Galaxy S3
Ku iftiimiya ROM saamigaaga Xperia-ga Flashtool
Tabobar si aad ugu iftiimiso shay ROM ah ama aad uga saarto Sony Xperia oo leh aaladda Flashtool. Cashar fudud oo fudud.
Samsung Galaxy S3, Rom ReVolt JB Android 4.2.1
Maanta waxaan soo bandhigayaa habka loo cusbooneysiiyo nooca Samsung Galaxy S3 GT-I9300 nooca ugu dambeeyay ee Android, 4.2.1
Samsung Galaxy S, Rom Galaxy Nexus Android 4.1.2 RC2 waxaa qoray Elitemovil
Nooca cusub ee roomaanta ugu fiican xilligan ee Samsung Galaxy S, RC2 ee Galaxy Nexus oo ka socda Elitemovil, Android 4.1.2
Samsung Galaxy S, Sida loo beddelo dpi-ka ugu dambeeyay Elitemovil rom (RC1 iyo RC2)
Tababar fudud oo leh sawirro iyo talaabo talaabo ah si aad u bedesho dpi qaababkii ugu dambeeyay ee Elitemovil rom ee RC1 iyo RC2, ee Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.2.1 dekedda del Nexus S RC1 ee Elitemovil
Maanta waxaan rabaa inaan dhammaantiin idinla wadaago sida ugu wanaagsan ee Android 4.2.1 Rom oo aan nasiib u yeeshay inaan siiyo Samsung Galaxy S, nooca RC1 ee elitemovil
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X 4.2 AOKP-JB Mr1
Waxaan horeyba u helnay inaan kala soo baxno Samsung Galaxy S romka ugu xiisaha badan xilligan, ee kooxda Tsunami X 4.2 ee leh Android 4.2.1
Samsung Galaxy S, ururinta moodooyinka
Liiska dhameystiran ee moodooyinka Samsung Galaxy S, oo ku habboon dhammaan ROM-yada ku saleysan MIUI ama Cyanogenmod.
Samsung Galaxy SCL, Rom EhnDroix II Android 4.1
Mid ka mid ah romerka ugu fiican ee Samsung Galaxy SCL model GT-I9003 iyo sidoo kale rakibaadda iyo soo dejinta tilmaamaha loogu talagalay.
Samsung Galaxy S, Rom RemICS-JB V2.0 Android 4.2.1
Qaabka rakibaadda iyo soo dejinta nooca cusub ee roomaanta ugu fiican ee Android 4.2.1 ee Samsung Galaxy S, RemICS JB V2.0
Samsung Galaxy S2, Rom SuperNexus V2.0 waxay dhisaan 1 Android 4.2.1
Rom SuperNexus V2.0 ee Samsung Galaxy S2 waa mid ka mid ah ROM-yadii ugu dambeeyay ee lagu daabacay xdadevelopers leh Android 4.2.1
Samsung Galaxy S3, Fenixer Rom V12 Android JB 4.1.2
Laga soo bilaabo HTCmanía iyo gacanta Fenixer waxay ka timaaddaa cajaa'ibkan rooma ee qaabka Samsung Galaxy S3 GT-I9300 oo leh Android Jelly Bean 4.1.2
Samsung Galaxy S, Rom Vortex 0.5 oo ay qortay Kooxda Tsunami Android 4.2.1
Vortex 0.5 rom waa qaybtii ugu dambaysay ee ka socota kooxda Tsunami Team ee wadata Android 4.2.1 ee Samsung Galaxy S model GT-I9000.
Samsung Galaxy S, CreedRom V13 Android 4.2.1 CM10.1
Cusbooneysiin cusub oo ku saabsan roomaadan xiisaha leh ee leh Android 4.2.1 ee Samsung Galaxy S model GT-I9000.
Samsung Galaxy S, Kooxda Rom RemICS-JB Android 4.2.1 V1.0
Rom Android 4.2.1 oo ka socda kooxda RemICS-JB team ee Samsung Galaxy S model GT-I9000.
Ku soo dejiso Android 4.1 ROM oo buuxa HTC One X
Waxaad hadda kala soo bixi kartaa nooca Jelly Bean Android 4.1 nooca Yurub ee HTC One X taleefanka gacanta.
Samsung Galaxy S, Rom VorteX 0.0 Android 4.2.1 oo ka socda Kooxda Tsunami
Rom leh Android 4.2.1 oo ka socda kooxda Tsunami ee Samsung Galaxy S oo ku saleysan CyanogenMod 10.1
Samsung Galaxy S, Rom Beast 4.2.1 oo wata Linaro Toolchain
Rom oo leh nambarkii ugu dambeeyay ee Android 4.2.1 oo leh Linaro 4.7 koodh loogu talagalay Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S, CreedRom V11, Android 4.2.1
Nooc cusub oo ka mid ah 'CreedRom', lambarka markan lambarkiisu yahay 11 oo wata Android 4.2.1 oo loogu talagalay nooca Samsung Galaxy S ee GT-I9000
Samsung Galaxy S, rasmiga ah Rom Android 4.2.1 Alpha 2 waxaa qoray Elitemovil
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee roomaada leh Android 4.2.1 oo ka socota Elitemovil oo loogu talagalay Samsung Galaxy S nooca GT-I9000
Samsung Galaxy S, Caqiido Rom V10 Android 4.2
CreeRom V10 waa mid ka mid ah romerka ugu waxqabadka badan oo ku saleysan Android 4.2 loogu talagalay Samsung Galaxy S model GT-I9000.
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.2 oo ka socda Elitemovil Alpha
Rooti cusub oo wata Android 4.2 oo loogu talagalay Samsung Galaxy S oo ay abuureen kuugga HTCManía elitemovil iyo kooxdiisa horumarinta
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X3.3 cusbooneysiin cusub
Halkan waxaan ku haynaa nooca cusub ee noqonaya midka ugu fiican Jelly Bean rom ee loogu talagalay Samsung Galaxy S nooca GT-i9000
Samsung Galaxy S, Rom F1 Galaxy SII V8 Beta Final XXJVU
Kani waa gingerbread Android 2.3.6 rom oo leh dhamaan barnaamijyada asalka ah ee Samsung Galaxy S, raadiyaha asalka ah, kamarada asalka ah iyo Samsung Apps.
Google Nexus 7, Rom glazed V2.1 Android 4.1.2
Rom Glazed V2.1 waa ROM lagu kariyey salka CM10 oo na siiya degganaansho iyo xawaare aan loo dhigmin Google Nexus 7.
Tsunami X3.0, cusbooneysiinta Samsung Galaxy S
Soo qaado habka kuna cusbooneysii nooca cusub ee romanka Tsunami, Tsunami X3.0 ee Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S3, Rom NxTGen Rom v5.0
Jelly Bean rom kale oo loogu talagalay Samsung Galaxy S3, oo ku saleysan Samsung asalka asalka ah ee Android XXDLJ4
Samsung Galaxy S2, Rom Rootbox, nooc cusub v3.0
Rom Vanilla nooca 3aad ee moodooyinka Samsung Galaxy S2 GT-I9100 iyo GT-I9100P
Tsunami X2.5, cusbooneysiinta Samsung Galaxy S
Waxaan horeyba halkan ugu hayney nooca cusub ee roomaanta ugu fiican xilligan loogu talagalay nooca Samsung Galaxy S ee GT-I9000, Tsunami X2.5
Samsung Galaxy S3, Rom Omega V28 XXDLIH Jelly Bean
Romka Omega V28 waa midka ugu wanaagsan ee aan ka heli karno Samsung Galaxy S3, kuna saleysan Android Jelly Bean 4.1.2
RootBox Rom Jelly Bean 4.1.2 ee Samsung Galaxy S2
Mid ka mid ah romerka ugu fiican Samsung Galaxy S2, oo leh nooca ugu dambeeya ee Android 4.1.2
Samsung Galaxy S3 Rom Immortal V1.1 ee Dora Team Android 4.1.1
Rom V1.1 aan dhimaneyn oo loogu talagalay Samsung Galaxy S3, soo dejisan iyo habka rakibaadda oo faahfaahsan, talaabo talaabo ah iyo nadiifiyaha kernel ka mid ah
Rom Control iyo Cusbooneysiinta Ota ee Tsunami x2.0
Tsunami x2.0 waa mid ka mid ah romanka ugu fiican ee Jelly Bean ee aan ka heli karno Samsung Galaxy S, oo ay ku jiraan Rom Control iyo OTA Updater oo ku dhex jira liiska.
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X2.0, ayaa sii wadaya sixirka
Romanka Tsunami X2.0 waa jelly Bean rom loogu talagalay Samsung Galaxy S, mid ka mid ah kuwa ugu soo dejinta badan uguna guusha badan xilligan.
Samsung Galaxy S2, Rom Dib u Soo Celinta Remix JB AOKP Iyadoo Lagu rakibayo Udgoon
Soo bandhigida iyo habka rakibaadda ee Qiyaamaha Remix V3.08 rom ee Samsung Galaxy S2 oo leh Android Jelly Bean.
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X1.5, romka ugu fiican waqtigaan Jelly Bean
Markan waxaan kuu soo bandhigayaa romanka Tsunami X1.5, aniga ahaan jelly Bean romka ugu fiican Samsung Galaxy S, kan ugu dhaqsaha badan uguna waxqabadka badan ee aan isku dayay
C-Rom Bean 1.8.0 ee Samsung Galaxy S GT-I9000 OTA
Android 4.1.1 Jelly Bean Rom oo ka socda kooxda C-Rom ee Samsung Galaxy S, C-Rom Bean 1.8.0
QissMe Rom, noocyo cusub oo loo heli karo HTC, Motorola iyo Samsung
QissMe Rom waa roms leh qaab muuqaal ah oo aad u taxaddar badan isla markaana u shaqeeyay si xad dhaaf ah, oo la jaan qaada Samsung, HTC iyo Motorola.
Rom Jelly Bean Android 4.1.1 Codename 3.5.0 qalab kala duwan
Codename 3.5.0 waa mid ka mid ah ROM-yada taageera aalado badan, si macquul ah uga dambeeya Cyanogen iyo AOKP.
Qaybtii ugu dambaysay ee MackayRom V1.2.3, waa guul, qoraalkanna waxaan ku tusayaa fiidiyoow sida ay ugu rogmato Samsung Galaxy S
Kooxda C-Rom Team CM10 ee Samsung Galaxy S OTA iyo Touchwiz
Jelly Bean rom kale, oo ku saleysan CM10 oo noo ah Samsung Galaxy S. Shaqo tayo sare leh oo cusbooneysiin doonta terminaalkeena Android 4.1.1
Samsung Galaxy S, Rom Miui V4.1 Jelly Bean Muchopoli83 nooca 2.9.7
Rom ugu fiican ee xilligan loogu talagalay Samsung Galaxy S, oo leh Android 4.1.1 Jelly Bean iyo tayada romu Miui.
Ku hagaaji arrinta raadadka nuqul ee Roms Jelly Bean ama ICS
Xalka qeexan ee dhibaatada ku saabsan raadadka nuqullada ee ku saabsan Android, badanaa ICS iyo Jelly Bean roms.
Rasmiga Android 4.1 Jelly Bean cusbooneysiinta Samsung Galaxy Note iyo Tab
Android 4.1 Jelly Bean waxay u timaadaa aaladaha cusub ee Samsung iyada oo loo marayo ROM-yada rasmiga ah
Samsung Galaxy S, Rom RemICS-JB V2.0 oo inbadan la sugayay
Jelly Bean Rom ugu fiican ee Samsung Galaxy S, nooca GT-I9000, oo ah romaan qurux badan oo ka tirsan kooxda RemicS team
Samsung Galaxy SII, Rom SuperNexus - I9100 - BUILD 2 Android 4.1.1
Rom wuxuu si toos ah uga daboolayaa Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy SII, oo ah nooca Android 4.1.1 Jelly Bean
Samsung Galaxy S, Rom MIUI Jelly Bean 2.8.24 waxaa qoray muchopoli83
Riyada ugu fiican Miui Jelly Bean ee Samsung Galaxy S, soo dejiso iyo sida loo rakibo
Samsung Galaxy S, Rom rasmi ah Android 4.1.1 RC10 laga bilaabo @elitemovil
Nooca ugu horreeya ee Jelly Bean ee aqoonsanaya kaarka xusuusta dibedda ee kombuyuutarka, ayaa hadda loo heli karaa Samsung Galaxy S.
Samsung Galaxy S, Rom MIUI Jelly Bean 2.8.17 waxaa qoray muchopoli83
Habka rakibaadda Miui Rom kii ugu horreeyay oo leh saldhig beel ah oo loogu talagalay nooca Samsung Galaxy S ee GT-I9000
Nigthly-kii ugu horreeyay ee CyanogenMod 10 (Android 4.1.1) ayaa halkan jooga
CyanogenMod 10 Nigthly's ayaa halkan loogu talagalay tanno ah qalab ku habboon
QissMe Rom, Roms qurux badan oo loogu talagalay HTC, Samsung iyo Motorola
QissMe Rom waa sheeko roman ah oo asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha oo leh sheekoyin fara badan iyo qaab sawireed aad u taxaddar badan.
Samsung Galaxy S, Rom X-Bean 1.0 ee XYunknown Android 4.1.1
Jelly Bean rom cusub oo loogu talagalay Samsung Galaxy S, rom oo ay ku jiraan kuwa ugu fiican AOSP iyo CM10
New GlassRom V06.3 XXBLG1 ee Samsung Galaxy SIII (GT-I9300)
Sida loo rakibo GlassRom v6.3 cusub Samsung Galaxy SIII
Kooxda Android Jelly Bean V7.1 ee Samsung Galaxy S
Qoraalkan waxaan ku soo bandhigayaa waxa aniga ii ah kan ugu fiican Jelly Bean rom ee loogu talagalay Samsung Galaxy S, Team Android Jelly Bean rom.
HTC Desire S, Rom BlindBean v1.5 Jelly Bean AOKP
Cashar fudud oo faahfaahsan oo lagu rakibo rom-ka la kariyey ee HTC Desire S oo lagu cusbooneysiiyo Android 4.1.1 Jelly Bean